Aasaaska Sandals: Samaynta Farqi Wayn ee Bahamas
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Aasaaska Sandals: Samaynta Farqi Wayn ee Bahamas
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Curacao Breaking News • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Waajib ah • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Sandals Foundation waxaa ka go'an in ay ilaaliso deegaanka, dhisto bulshooyin ka caafimaad badan, iyo taageeridda waxbarashada gudaha dhammaan meelaha loo aado meelaha ay ku yaalaan Sandals and Beaches Resorts. Laga soo bilaabo Antigua & Barbuda ilaa Barbados, laga bilaabo Curacao ilaa Grenada, laga bilaabo Jamaica ilaa Saint Lucia, iyo ilaa Bahamas, Sandals waxay kobcisaa nolosha dadka jasiiradaha Kariibiyaanka ah.
Waayo, kabahaaga, rajada dhiirigelintu waa ka badan tahay falsafada; waa baaq waxqabad. Waxay ku saabsan tahay in lagu qalabeeyo dadka Kariibiyaanka ah kalsooni, karti, iyo buuxin, iyadoo la siinayo bulshooyinka xalal waara oo dhab ah dhibaatooyinka ay la kulmaan maalin kasta. Dhanka kale, Aasaaska waxaa maalin walba dhiirigeliya adkeysiga dadka, hal-abuurkooda, iyo adkeysigooda si ay u gaaraan nolol wanaagsan. Abaalmarinta aan la qiyaasi karin ee Sandals Foundation waxay ahayd horumarka iyo guusha barnaamijyadeeda iyo ka faa'iideystayaasha.
Waa kan waxa Sandals ka samaynayey Bahamas.
Mu'asasada Sandals waxay samaysay ballanqaad ku wajahan dhammaan gobolka Kariibiyaanka inay si degdeg ah uga jawaabaan xaaladaha degdegga ah ee qaran ee ay sababaan masiibooyinka dabiiciga ah. Mu'asasada lobbies waxay taageertaa martida dalxiiska, la-hawlgalayaasha ganacsiga, wakiilada safarka, alaab-qeybiyeyaasha, iyo ururada kale si ay gargaar ugu keenaan bulshooyinka ay dhibaatadu saameysey.
Bahamas waxa soo gaadhay khasaare ba’an sannadihii la soo dhaafay taas oo ka dhalatay duufaanno. Sannadkii 2015, Qaybta 4aad ee Duufaanta Joaquin ayaa ku soo dhacday Long Island taas oo sababtay khasaare weyn. Mu'asasada Sandals waxay bilowday olole ballaaran oo shirkadeed oo dhan dhammaan guryaha iyo xarumaha shirkadaha si ay gacan uga geystaan ​​dadaallada soo kabashada jasiiradaha.
Ka dib, Mu'asasadu waxay dayactirtay oo qalabaysay Ururka Kansarka Scrub Hill Long Island, Xarunta Khayraadka Long Island, iyada oo la kaashanaysa Wasaaradda Waxbarashada iyo Naadiga Saaxiibtinimada Haweenka ee Long Island.
Sannadkii 2016, duufaanta Matthew ayaa ku dhufatay jasiiradaha Bahamas. Mu'asasada Sandals waxay abaabushay jawaab degdeg ah si ay gacan uga geysato dardargelinta hannaanka dib u soo celinta caadiga ah ee hawlaha jasiiradaha. Guriga dadka da'da ah ayaa laga soo helay magaalada Bains iyadoo ay weheliso qaybinta matoor-dhaliye, taarpaulins, cunto, iyo biyo Grand Bahama, Andros, iyo Nassau.
Sandals Foundation waxay iskaashi la samaysay Bahamas National Trust ee ololaha Ilaalinta Conch maadaama kalluumeysiga konjadu uu dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaanba muhiim u yahay Bahamas. Ololaha "ilaalinta" wuxuu caawiyay kor u qaadida dhaqamada kalluumeysiga waara wuxuuna ku guuleystey kordhinta wacyiga ku saabsan warshadaha konjarada.
Telefishinada iyo raadiyaha PSA-yada waxaa loo soo saaray ujeeddooyin waxbarasho oo bulshooyinka miyiga ah waxaana meelo lagu tixgalinayo la dhigay makhaayadaha cuntada degdega ah iyo kuwa maxalliga ah taas oo qayb ka ah dadaallada loogu ololeynayo taageerada iyo kordhinta aqoonta ololaha iyo ujeeddooyinkiisa.
U fuul si aad u Badbaadiso Dhulka qoyan
Iyada oo loo marayo waxbarasho waayo-aragnimo ah, Sandals Foundation waxay keentay in ka badan 3,000 oo arday Bahamas safarrada doomaha-fuushan ee mangroves si ay u baraan muhiimadda dhul-qoyanku u leeyihiin nidaamka deegaanka. Tartan boodhadh ah oo ardayda ka qayb galaysa ayaa sidoo kale la qabtay si ardayda loogu ogolaado inay soo bandhigaan waxyaabihii ay ka barteen safarrada dibadda.
Ilaa 2010, Dugsiga Hoose ee Gambier, oo ay ku nool yihiin 105 wiilal iyo gabdho ah oo da'doodu u dhaxayso 6 iyo 11, ayaa ahaa dugsi la qaatay Sandals Foundation. Mu'asasadu waxay si firfircoon uga qayb qaadatay horumarinta ardayda, shaqaalaha, iyo xarumaha dugsiga sannadihii la soo dhaafay oo ay ku jiraan ku-deeqidda agabka dugsiga, barnaamijka la-talinta iyo akhris-qoraalka ee wiilasha, nadiifinta ilkaha ee ardayda, iyo marti-gelinta xafladaha daaweynta kirismaska ​​​​sannadlaha ah iyo alaabta ay ku ciyaaraan. qaybinta.
Dugsiga Hoose ee Rokers Point waxa uu ahaa dugsi la qaatay Sandals Foundation ilaa 2011. Aasaaska waxa ay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka koritaaneed ee dugsiga si loo hubiyo horumarka ardayda ee nidaamka waxbarashada iyo bulsho weynta. Mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee ay Hay'addu ka fulisay Dugsiga Hoose ee Roker's Point ayaa ahaa dib-u-habaynta iyo qalabaynta shaybaadhka kumbuyuutarka ee ay ka faa'iidaysanayaan 140 arday.
Sandals Foundations waa urur aan faa'iido doon ahayn oo la furay bishii Maarso 2009 si ay u caawiyaan Sandals Resorts International inay sii wadaan inay isbeddel ku sameeyaan nolosha dadka ay ka jiraan guryaha Sandals.